More Data, Ihe ịma aka ndị ọzọ | Martech Zone
More data, ihe ịma aka ndị ọzọ
Thursday, August 8, 2013 Douglas Karr
Nnukwu data. Amaghị m ihe ị na-eme mana ọtụtụ ndị ahịa anyị na-eri mmiri na ya. Ọ bụ ezie na ikpo data na-aga n'ihu, anyị na-achọpụta na ọtụtụ ndị ahịa anyị anaghị ejikwa ụfọdụ usoro ahịa azụmaahịa dị mkpa iji nweta, jigide ma melite uru ndị ahịa. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ha na-agba mgba nke nnukwu njikọ dị n'etiti IT na ahịa. Naanị ụnyaahụ, m ga-agwa otu n'ime ndị ọrụ IT anyị ka anyị kọwaa etu popup blockers na-egbochi ikike ndị mmadụ ijikọ na ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ n'ihi na emebere njikọ njikọ mmekọrịta ha niile na windo popup. Ekwesighi m ịkọwa na team ndị otu IT kwesiri ị rụ ọrụ arịrịọ a.
Dị ka Teradata Data Na-enyocha Ọchụchọ Ahịa 2013, ndị na-ere ahịa na-atụkwasịkwu obi na na-eji ụdị data nkịtị, dị mfe, na nke dị mfe ịnweta iji kwalite atụmatụ ahịa ha. N'ezie, 75% ma ọ bụ karịa nke ndị ahụ nyochare jiri data ọrụ ndị ahịa, data afọ ojuju ndị ahịa, data mmekọrịta dijitalụ (dịka, ọchụchọ, mgbasa ozi ngosi, email, nyocha weebụ), na data igwe mmadụ, yana ihe karịrị ọkara na-eji data dịka ntinye aka ndị ahịa. (ịmaatụ, ojiji ngwaahịa ma ọ bụ data mmasị), azụmahịa (dịka, omume nzụta na-anọghị n'ịntanetị), ma ọ bụ data e-commerce.
Kedu ka ndị ahịa taa si ele ikike ha nwere ijikọ na itinye nnukwu data iji rụpụta nsonaazụ dị nfe? Gbanye na ahia nke data na Teradata's Data-Driven Marketing Survey, 2013, Nsonaazụ Global pụta:
Tags: nhazinnukwu dataKeduitatụmatụdata tera
The Email Service Provider SaaS ricnye ọnụahịa ntaramahụhụ
Na-anabata Mmebe, Inweta ya nke ọma